XASAASI: Fursada Cristiano Ronaldo Ee Kulanka Juventus vs Barcelona & Haddii Uu Diyaar U Noqon Doono Inuu Messi Wajaho - Gool24.Net
XASAASI: Fursada Cristiano Ronaldo Ee Kulanka Juventus vs Barcelona & Haddii Uu Diyaar U Noqon Doono Inuu Messi Wajaho
Waxa laga sii faaloonayaa kulamada uu garoomada ka maqnaan karo kabtanka xulka qaranka Portugal ahna weeraryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo oo shalay si rasmi ah loo xaqiijiyay in laga helay xanuunka Korona Fayras.
Ronaldo ayaa laga helay caabuqa saf-marka ah isaga oo ku sugay isku diyaarinta kulamada Nations League ee xulkiisa Portugal waxaana uu kulanka ugu horreeya ee uu seegayaa uu noqonayaa midka caawa ee xulkaasi dhigooda Sweden kahor tagayaan.
Marka laga yimaado inuu maqnaanayo kulamada Portugal, dhinaca kale waxa jira ciyaaro muhiim ah oo kusoo wajahan kooxdiisa Juventus oo uu ugu muhiimsan yahay UEFA Champions League oo dhawaan bilaabmaya.
Kulanka sida aadka ah isha loogu wada hayo ayaa ah midka ay Juventus la yeelan doonto dhigeeda Barcelona markaas oo la filayay in dib loo daawan doono is-araga Ronaldo iyo Messi oo aan mudo laba sano ah garoomada iskaga hor iman.
Haddaba, sida ay xogaha u dambeeyay sheegayaan fursada uu CR7 kaga hortagi karo Messi ayaa ah mid aad u hooseysa waana war naxdin ku ah taageerayaasha filayay inay markale daawadaan iyaga oo dhinacyo kala duwan ka safan.
Sharciga xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa ah in ciyaaryahanku uu kasoo kabto caabuqa Korona ugu yaraan 7 maalmood kahor inta uusan ciyaarin kulan Champions League amaba Europe League ah.
In shalay oo 13-kii October ahayd laga helay Ronaldo xanuunka isla markaana kulanka Barcelona uu yahay 28-ka bishan ayaa ka dhigan inuu haysto fursad aad u hooseysa oo ciyaartaas loogu arki karo.
35 sano jirkaas ayay hubaal tahay inuu maqnaan doono kulamada ay Bianconeri la yeelan doonaan kooxaha Crotone iyo Dynamo Kyiv.